Ny vokatry ny IVF
Matetika, ireo zaza mety ho te hanaraka ny dingan'ny famokarana vitaminina dia liana amin'ny fanontaniana hoe inona no mety hitranga aorian'ny IVF, ary raha mety hampidi-doza ho an'ny vatan'ny vehivavy izy ireo. Andeha hiezaka hamaly ity fanontaniana ity isika ary hiantso ireo fahasarotana lehibe izay mety hitranga aorian'ny fombafomba.
Inona no mety hampidi-doza IVF?
Voalohany indrindra, tokony lazaina fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia manjary tsy misy làlan-kizorana ny zavamananaina. Ny teboka iray manontolo dia ny fandaharam-potoana efa nomanin'ny mpitsabo tsara ary alohan'ny fitazonana ny vehivavy.
Na dia izany aza, ny fitarihana IVF dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny vehivavy. Isaky ny mahazatra dia ilaina ny manamarika:
Fihetseham-po tsy mandeha tsara amin'ny fitsaboana hormonina. Mba hisorohana io tranga io, ny dokotera dia manisy tsindrona kely amin'ny hormone ary mandinika ny tsy fisian'ny fihetseham-po. Na izany aza, ilaina ny mitadidy ny vokatra kumulative rehefa, rehefa nahatratra ny fifantohana amin'ny fifantohana ao amin'ny vatana amin'ny hormone synthetic, dia miteraka fihetseham-po tsy dia mahazatra.
Rehefa manatontosa IVF dia mitombo ny loza ateraky ny fiterahana mandritra ny fitondrana vohoka.
Famerenana ny fitsaboana mitaiza be loatra ao amin'ny vatana, izay mety ho voan'ny aretina mandritra ny fanasaziana.
Ny vehivavy bevohoka dia tsy mahazatra amin'ny IVF. Amin'ireo tranga ireo izay mamelona ny embryon 2, ny dokotera dia miteraka fihenam-bidy, i.e. Hamarana ny fisian'ny iray amin'izy ireo. Io fomba fanao io dia mifandraika amin'ny mety hiteraka fahafatesan'ny embryon iray mandritra ny fitondran-tenany.
Inona no ataon'ny vehivavy matetika amin'ny IVF?
Ny olana mahazatra indrindra eo amin'ny vehivavy aorian'ity dingana ity dia ny tsy fahombiazan'ny hormona. Ny zava-misy dia alohan'ny hanapahana ny dokotera dia mampitombo ny fifantohana ny progesterone mba hanamafisana ny fambolena ary hanentanana ny famotsorana sela maromaro avy amin'ny follicles.
Vokatr'izany dia mety hipoitra ny fihanaky ny ovy. Miaraka amin'ny fanitsakitsahana toy izany, dia mitombo ny habetsahan'ny tovovavy, ary mety hipoitra eo amin'ny elany ny cysts. Ny vehivavy dia miahy:
Nihena ny vokatra azo avy amin'ny fery (kely loatra ny fikajiana voatery).
Ny fitsaboana ho an'ny fanitsakitsahana toy izany dia mikendry ny hizara ny hormona fototra. Raha eo anatrehan'ny cysts, dia asiana fandidiana ny fandidiana.
Ny tsy fahampian-kevitry ny progesterone - ny soritr'aretina
Toerana misy ilay vava
Firy andro mialoha ny fikarakarana ny fikarakarana dia mety ho bevohoka aho?
Te-handroaka haingana aho!
Afaka bevohoka ve aho aorian'ny ovulation?
Mody faneva ho an'ny pantson'ny lehilahy
Tomaty - ireo karazana tsara indrindra ho an'ny fikarakarana
Loko fanaingoana fanaovan-jiro fanoratana
Ny fahatsapana ho manirery sy ny tafahoatra: ny fifandraisana
Ny saka lehibe indrindra amin'ny saka
Kitrokely misy siramamy ao anaty lafaoro
Fanalan-jaza heloka bevava
Aretina marefo amin'ny zaza
Amin'ny inona ny akanjonao?
Ahoana no hanombohana ny lanjany?
Ny fandidiana plastika an'i Ben Affleck
Sandwich ao amin'ny mikrô
Satsivi avy amin'ny akoho ao Géorgie - fomba mahazatra an'ity sakafo Kaokazy ity
Sakafo avy amin'ny champignons - sakafo mahasalama amin'ny famokarana holatra
Sakafo Sporting Adidas